Do You Tip Carpet Cleaners – Answered!
घर / कालीन सफा गर्ने, रसायन सुख्खा कारपेट क्लीनर, उत्तर अमेरिका, क्षेत्र, सेवा, स्टेनली स्टिमर कार्पेट क्लीनर, Zerorez कार्पेट क्लीनर / तपाईं टर्प कालीन क्लीनर
1 टिपिंग कार्पेट क्लीनर
1.1.1 फोहोर कार्पेट छ?
1.1.2 कालीन सफाई लागत र ठूला कालीन सफाई ब्रांडहरू के हुन्?
1.1.3 कालीन सफाई विशेष
1.1.4 एक पेशेवर कालीन सफा गर्ने कम्पनीलाई काममा लगाएर बनाउने काम आफै गर्नुहोस्
1.2 के तपाईं कालीन सफा गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ?
1.3 कालीन सफा गर्नेलाई कति टिप दिने?
1.4 मैले कालीन सफा गर्नेका लागि टिप कसरी छोड्नु पर्छ?
1.5 म मेरो कार्पेट क्लीनरसँग सन्तुष्ट भएँ, मैले के गर्नुपर्छ?
टिपिंग कार्पेट क्लीनर
फोहोर कार्पेट छ?
नियमित भ्याकुमिंगको साथ पनि, तपाईंको कार्पेटहरूलाई अन्ततः गहिरो सफाई आवश्यक पर्दछ जुन केवल 'स्टीम क्लीनर' मात्रै गर्न सक्दछ। सबै 'स्टीम क्लीनरहरू' एकै हुँदैनन् र धेरैले स्टीम पनि प्रयोग गर्दैनन्। ती सबैको लागि एक साधारण घटक भनेको उनीहरूले पानी र एक घटक प्रयोग गर्छन् तपाईको कार्पेटमा भएका सबै फोहोर र गन्धलाई भंग गर्न।
कालीन सफाई लागत र ठूला कालीन सफाई ब्रांडहरू के हुन्?
यदि तपाईंसँग फोहोर कालीनहरू छन् जसलाई गहिरो सफा गर्न आवश्यक छ, कालीन सफा गर्ने पेशेवरहरूसँग तपाईंको गलैंचा कुनै समयमै नयाँ जस्तो देखिन सक्छ। जबकि तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ कि स्टीम सफाई महँगो छ, यो सामान्यतया सस्तो छ, rooms कोठाको लागि $। Or वा rooms कोठा सस्तोमा $ १99 in मा। त्यो एक राम्रो ठूलो सम्झौता होईन।
त्यहाँ स्टीम क्लीनिंग उद्योगमा धेरै प्रतिस्पर्धा छ र परिणाम स्वरूप, तपाईं राम्रो सौदा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जब सम्म तपाईं वरपर हेर्नुहोस्। मुख्य राष्ट्रव्यापी कालीन सफाई कर्मचारीहरू हुन् स्टानले स्टीमरहरू, केम ड्राई कार्पेट सफाई, र जिरोरेज। त्यसो भए तपाईसँग धेरै स्थानीय कालीन सफाई कम्पनीहरू छन्। प्रमुख कम्पनीहरूले प्राय: विशेष चलाउँछन् वा कूपनहरू हुन्छन् जसले स्टीम क्लीनिंगलाई किफायती स्तरमा प्राप्त गर्दछन्। वरपर कल गर्नुहोस्, केहि उद्धरणहरू पाउनुहोस्, र विशेष प्रस्तावहरूको लागि जाँच गर्नुहोस्।
कालीन सफाई विशेष
कालीन सफाई कम्पनीहरूले प्राय: विशेष पदोन्नतिहरू चलाउँछन् वा छुट कुपनहरू छन्। याद गर्नुहोस् कि राष्ट्रव्यापी सबैभन्दा ठूला कम्पनीहरू हुन् स्ट्यान्ले स्टिमर कार्पेट क्लीनर, चेमड्राइ कार्पेट क्लीनर, र जेरोरेज कार्पेट क्लीनर प्लस त्यहाँ धेरै अन्य स्थानीय कालीन सफाई कम्पनीहरू छन्। सबै ठूला कम्पनीहरूसँग नियमित विज्ञापित प्रमोशनहरू हुन्छन् त्यसैले तपाईले बुक गर्नु अघि एकको लागि जाँच गर्नुहोस्।
कालीन सफाई विशेष वा कुपनको प्रयोग गर्नाले कार्पेट सफा गर्ने तरीकाको लागत पाउन सकिन्छ। सब भन्दा साधारण सम्झौता rooms total कुल छ rooms कोठामा कालीन सफा गर्न वा rooms कोठामा कालीन सफा गर्न total १99 total कुल। त्यो धेरै सस्तो छ! यदि तपाईं नजिकको कार्पेट सफाई कम्पनीमा सबै राम्रा सम्झौताहरू फेला पार्न चाहनुहुन्छ भने, कार्पेट सफाई विशेषको लागि गुगल खोज्नुहोस्, कार्पेट क्लीनिंग स्पेशल मेरो नजिक $ १3 special विशेष ', zerorez कालीन सफाई विशेष, सबै भन्दा राम्रो कालीन सफाई सौदा, र मेरो कालीन सफाई सौदा।
एक पेशेवर कालीन सफा गर्ने कम्पनीलाई काममा लगाएर बनाउने काम आफै गर्नुहोस्
यो आफैलाई गर्नका लागि, तपाई आफैले स्टीम क्लीनर किन्न सक्नुहुनेछ वा स्टोरबाट एउटा भाडामा लिन सक्नुहुनेछ, तर परिणामहरू प्रायः निराश हुन्छन्। स्टीम क्लीनर, साबुन, र संरक्षकको लागत पनि अक्सर एक पेशेवर कालीन सफाई सेवाको लागत भन्दा बढी हुन्छ ताकि तपाईं केवल एक स्टीम क्लीनर आफैं खरीद गर्न चाहानुहुन्छ यदि तपाईं यसलाई नियमित रूपमा प्रयोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने। मध्यम परिणामको अलावा, शिष्ट काम गर्नाले तपाईलाई धेरै, धेरै घण्टा लाग्न सक्छ किनकि यो पेशेवर उपकरण होइन, स्टीमर साँघुरो छ, र तपाईले धेरै पटक उही क्षेत्रमा जानु पर्छ। तपाईको समय केहि मूल्यको छ र तपाईको साप्ताहिक अन्तरालमा पछाडि पछाडि पछाडि पछाडि जानु पर्दैन भन्ने आशामा कार्पेटको दायरा मात्र अलि कम देखिन सकिन्छ। र त्यहाँ एक कार्पेट सफाई कम्पनी आउँछ।
के तपाईं कालीन सफा गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ?
तपाईंले कारपेट सफा गर्ने कम्पनी भाडामा लिनुभयो र कार्पेट सफा गर्ने केटा चाँडै आउँदैछन् वा उनीहरू पहिले नै तपाईंको घरमा छन्। तपाईं कालीन सफाई टिप गर्न मानिन्छ? उचित टिपिंग शिष्टाचार के हो?
टिपिंग कार्पेट क्लीनरहरू परम्परागत छैन वा अपेक्षित छ यसैले टिप नछोड्नुहोस्। अवश्य पनि, यदि तपाईं राम्रो सेवाको लागि टिप छोड्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंको कार्पेट क्लीनरहरूले यसलाई कदर गर्नेछन्।
त्यहाँ केहि केसहरू छन् जहाँ तपाईंलाई लाग्न सक्छ कि तपाईंले आफ्नो गलैंचा सफा गर्ने मान्छेहरूलाई टिप दिनु पर्दछ, जस्तै यदि उनीहरूले तपाईंको वरिपरि भारी फर्निचरहरू लगेका छन्।
कालीन सफा गर्नेलाई कति टिप दिने?
जे होस् तपाईसँग टिप छैन, तपाईले car5- $ 10 प्रति कार्पेट सफा गर्ने मान्छे असाधारण सेवा को लागी छोड्नुहुनेछ। यो कदर गरिनेछ।
मैले कालीन सफा गर्नेका लागि टिप कसरी छोड्नु पर्छ?
यदि तपाईं आफ्नो कार्पेट सफा गर्नेलाई टिप छोड्दै हुनुहुन्छ भने, तिनीहरूलाई दिने उत्तम छ उनीहरू तपाईंको घर छोड्दैछन्। कामको सुरूवातमा वा आधा बाटो हुँदै पनि टिप नगर्नुहोस् किनकि टिपले ठूलो काम गर्दैछ। तपाइँ केवल तब मात्र थाहा पाउनुहुनेछ जब कामको अन्त्यमा सबै ठीकठाक भयो!
म मेरो कार्पेट क्लीनरसँग सन्तुष्ट भएँ, मैले के गर्नुपर्छ?
पहिले, टिप छोड्नु पर्ने महसुस नगर्नुहोस्! टिपिंग कार्पेट क्लीनर जे भए पनि आवश्यक पर्दैन र तपाईंले कहिल्यै कम सेवका लागि टिप छोड्नु पर्ने दायित्व महसुस गर्नु हुँदैन।
यदि तपाईं प्राप्त सेवाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने, तपाईंले कम्पनीलाई सूचित गर्नु पर्छ। सबै प्रमुख ब्रान्डसँग 'सन्तुष्टि ग्यारेन्टी' नीतिहरू छन् तर तपाईंले उनीहरूको स्थानीय अफिसहरू कल गर्न आवश्यक छ। यदि तपाईं main मुख्य ब्राण्ड मध्ये एक प्रयोग गरिरहनु भएको छैन भने, तपाईंको कम्पनीले सन्तुष्टि ग्यारेन्टी नीति र कार्यालयको सम्पर्क विवरण छ कि छैन हेर्न अनलाइन जाँच गर्नुहोस्।
यदि तपाईं major प्रमुख ब्रान्ड मध्ये एक मध्येको आफ्नो स्थानीय स्टीम सफाई कार्यालय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न तिनीहरूको सन्तुष्टि ग्यारेन्टी नीतिलाई सम्मान गर्न, तपाईंले राष्ट्रिय आक्रमणलाई सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। यहाँ देशव्यापी companies कम्पनीहरूका लागि राष्ट्रीय फोन नम्बरहरू छन्।
स्टेनली स्टीमर फोन नम्बर: १-1००-800--783। हो
ChemDry फोन नम्बर हो:
Zerorez फोन नम्बर हो: १-1-866--937
तपाईं यी phone फोन नम्बरहरू पनि कारपेटको सफाइको लागत जाँच गर्न र बुकिंग गर्न सक्नुहुन्छ।
कालीन सफा गर्नेकालीन सफाईगलैँचारसायन सुख्खासफाईस्टेनली स्टिमरटिपिङसुझावसंयुक्त राज्य अमेरिकाजिरोरेज कालीन सफा गर्नेरसायन सुख्खा कारपेट क्लीनरउत्तर अमेरिकाक्षेत्रसेवास्टेनली स्टिमर कार्पेट क्लीनरZerorez कार्पेट क्लीनर
नाई टिप क्यालकुलेटर 1932
स्लोभाकियामा टिपिंग 1883
के तपाइँ टिप एएए गर्नुहुन्छ? 1707
टिपिंग टूर गाईड्स श्रीलंका 1697
D०० डलरमा कति डाइम्स छन्? 1695